Qorshaha doorashada gudiga degmada ee 2008 | Vihreät - De Gröna
Si cadaalada, doorasho madax banaan, xilka dabeeciga
Qorshaha doorashada gudida degmada ee xisbiga Vihrea 2008
Waxa lagu aqbalay shirkii weynihii la qabtay 24.2.2008
Siyaasad degmeedka xisbiga Vihrea wuxuu u dhisanyahay sidan:
Xilka dabeeciga ama isbedelka hawada waa mid dadka oo dhan khuseeysa
khayraadka noocyadiisa isbedelka iyo badbaadinta xayaawaanka waa xil saaran degmada
uma baahnin nukliyeer cusub iyo bohol la qodo
adeega guud waa midka keena ladnaanta
waa inay degmadu maal gelisaa caafimaadka, si aan daryeelka caafimaadku u noqon lacag
waalidku waa inay xaq u yeeshaan in ay doortaan hab xanaan maalmeedka ilmahooga
waxbarashada iskuulada hoose/dhexe oo loo sinnaado
degmooyinku waa inay yeeshaan shaqo bixiyaal cadaalada
dadweynaha degmada waa inay ku guuleystaan inay wax ku saameeyaan arrimaha wada jirka
cidhibtirka gaajada, lagana guuleeysto dan darada
waa in la dhowro xuquuqda dadka laga badanyahay xorumarinta sinaantana waa mid degmada u taala
dabeecad wanaaga, kala duwanaashaha waxay ka taageero u tahay horumadka degmada
degmo waxay wax ka bedeshaa dunida
degmadu waa inaga maamulkana waxa leh inaga. Markaynu wax ka bedelno degmada waxaynu waxa ka bedelnay dunida. Masu’uuliyiinta ay doortaan dadweynaha degmada waa kuwa xalinaya nooca mustaqbalkooda.
Ujeedada doorashada gudida degmada waainay daryeelaan xanooniyinkii, caafimaadkii, maktabooyinka, tiyaatarada, riwaayadaha, xaafadaha, jidadka, jardiinooyinka, dekadaha iyo garoomaha ciyaaraha. Degmada waxa siddo kale masuul ka saaranyahay wanaajinta gaadiidka dad weynaha, meesha iyo nooca guryaha la dhisaayo iyo in agaarka laga qodaayo bohol ama xarunta qashin gubida.
Xisbiga Vihrea waxa uu doonayaa in uu dhiiri geliyo siyaasada degmada, si qeexnaana oo cadaalada iyo qaynuun cad. Siyaasadu waxay u baahantahay ujeedo weyn iyo wakhti badan, waxaana loo baahan yahay khibrad iyo kalsooni waxqabad, taasoo wax ka bedelideeda u muuqata wax adag. Waxaa loo baahanyahay waxqabad farxad leh, waxqabadyo cusub hawlo cusub.
1. Talaabo a qaadida wasaqeynta hawadda
Waxyaalaha wasakheeya hawada waxaa dhaliya meelo badan oo wax lagu sameeya, degmada iyo inaga deegaanka ah waxaynu ku yarayn karnaa wasakhayntaas hawada inaynu caawino aha hindisno tamar cusub wax kastana ka hor marino dhaqaalaynta tamarta.
Xisbigu waxa ay qabteen welina si qota dheer gabashadeeda ugu jiraan sidii ay u badbaadin lahaayeen hawada sida xisbiyada kale. degmada xisbigan ku badanyahay waxay ka sameeyaan xalalka lagu yarayn karo is bedelka hawada inay wasakhoobin. Waxaanu rabnaa inay sideeda ahaadaan shuruudaha u wanaagsan nolosha iyo nadiifinta deegaanka jiilkeena.
Waa inaynu isku daynaa, kordhinaana oo daryeelnaa tamarta degmada iyo shirkadaheena korontada. Degmadu waa inay ka caawisaa koronto ku baxaysa guryaha, mida hiitar iyo saliida loo isticmaalo hiitarka siddoo kale ay horu mariyaan xirfadaha lagu daryeelo hawada una kordhiyaan si dhakhso ah. Degmooyinka uu xisbiga Vihrea ku badan yahay waxaa laga helaa shaqooyin badan, tegnoolaji, tamar, beero abuurid iyo adeegyo. Gaadiidka degmada waa inuu gaadhaa meel kasta waana in uusan kala joogsan magaalooyinka koonayaashooda, magaalooyinka ku xeeran iyo miyigaba. Gudida gaadiidka waa inay hagaajiyaan gaadiidka dadweynaha ee wadanka oo dhan xisbiguna diyaar buu u yahay caawinta dhaqaalaha, waxaan rabnaa in aanu siyaadino adeega gaadiidka sida Daraamka oo ah mid aan hawada waxba u geysanayn, waa inaannu hoos u dhignaa qiimaha gaadiidka, gaadiidkuna ahaadaa mid dheereeya, nabadgelyo leh laguna raaxaysto. In la wanaajiyo wadooyinka ay maraan baaskiilada iyo dadkaba.
Xisbigeena Vihrea waxa uu si dhab ah oo dulqaadna leh u eegaa mustaqbalka, meel kasa oo ay siyaasadu ka gasho isku daya inay soo ururiya isla markaana hir geliya, cidhiidhiga tarafikada laguma joojin karo wadooyin iyo baarkino dhisid lakiinse waxaa lagu joojinkara haddii lagu soo roga wakhtiyada tarafikada lacag, degmadu waa inay yaraysaa gaadiidka bilaa macnaha u socda ee wasakhaynaya hawada, daamaha xaafadaha la deganyahay waa inay u dhawaadaan goobaha adeega, qorshaha gadiidka in uu ahaado mid isku xidha miyiga iyo magaaladaba is xidhiidhka bulshadu u kala go’in.
Isbedelka hawada ma aha oo kelya dhibaatada jirta. Badbadadinta isbedelka hawada ma aha in xal looga dhigo waxyaalaha waxyeelooyinka keeni kara, goobaha badbaadinta iyo waxyaalaha qiimaha u leh isbedelka dabeeciga waa in la dhawraa.
Waxyaalaha bandhig dhaqameedka ama bilicsamida nawaaxiga waa in loo dhawraa si loogu raaxaysto, degmadu waa ina ay sugtaa nabada kaynta sidii hantideeda oo kale. Isku dhowaanshaha dhismayaasha waa in ay ahaadaan mid dhawrta kaynta u dhaxaysa iyo jardiinooyinka wakhtiga lagu qaato xeebtuna ahaato mid wada jir loogu raaxaysto. Xisbiga Vihrea degmooyinka uu ku badan yahay waa mid uu u sii diyaar garooba dhibaatooyinka ku iman kara nawaaxiga, waxa uu awooda saaraa sidii qashinka loo yaran lahaa dibna loo soo isticmaali lahaa, wax kastoo degmadu soo qaadanaysana in ay ahaadaan mid aan waxyeelayneyn nawaaxiga tusaale ahaan waxay kala xaajoodaan dukaamada waxyaalaha ay iib keenayaa inaysan noqo mid waxyeelaysa nawaaxiga.
Degmooyinku waa in xil iska saaraan maalna geliyaan adeega lagu ilaalinayo nabada xayawaanka.
2. Adeega, ilbaxnimada iyo dhaqankuba waa wanaaga nolosha.
Xisbiga Vihrea waa mid raadiya waxyaabo cusub iyo xalalka ay ku horu marin karaan ladnaanta dadka iyo sidii ay u yaran lahaayeen ladnaan darada dadka ama saboolnimada. Dhibaatada laga hor tagaa waxa ay ka kharash yartahay dhib dhacay ka soo kabashadiisa.
Xisbiga Vihrea waa kuwa taageera adeega guud, kuwaas oo keena cadaalad iyo sinaan isla mar ahaantaana hagaajiya wanaaga nolosha. Xisbiga vihrea waxa kaloo diyaar uu u yahay in uu cusboonaysiiyo adeegyada markay baahidu is bedeshoba. Adeegu waa inuu ahaado mid joogto ah si baahi qabaha baahidiisa loo kaafiyo, dadka deegaankana baahidoodanu waa mid kala duduwan, tusaale ahaan dadka waayeelada ah in loogu adeego guryahooga, si aan waayeelka loo geyn xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo taas oo u dhib yaraynaysa in ay iskood wax u qabsadaan dadaka curyaamiinta ah iyo waayeeladuba.
Xisbiga Vihrea ujeedadiisu waxa ay tahay in lacagta canshuurta lagu helo adeegyo wanaagsan iyo in lagu sugo ladnaashaha dadka deegaanka ah.
Ka niyad jabida iskuulka iyo takoorka waxaa looga hor tagi karaa kalkaalisada caafimaadka, cilminafsiga iyo tala siiyaha iskuulka. Waxa figrad wanaagsan ah in la maal geliyo koox yar oo laga sameeyo xanaanooyinka iyo iskuuladaba. Qofku waa inuu helaa gargaar deg deg ah haddii xanuunkiisu yahay jiro maskaxeed, degmada waa inay leedahay qaynuun dhexdooda ah, sinaan iyo go’aamo ku salaysan xaga caafimaadka.
Wanaaga noloshuna sidoo kalena waa xornimo inaad u dooran karto, tusaalle xanaanooyin kala duwan iyo iskuulaad kala duwan, taasoo macnaheedu yahay iskuulaadka waxbarashadda dugsiyadda hoose/dhexe iyo kuwa sareba, kuwa xirfadaha qofku rabo sidoo kale heshiiska shaqowaxbarasheedka iyo machadyadda sarre oo lacag la’aan ha.
Degmadda waa iney heshaa sidoo kale waxyaabo ka badan dukaan iyo goob shaqo. Degmo kastaana waa iney heshaa ganacsiyo madaxbanaan, maktabado, tiyaataro madax banaan iyo fanaaniin, goobo cayaar iyo kuwo bandhigba, goobo ay ku kulmaan dadka deegaankaas kuna sameystaan waxyaabaha ay xiiseynayaan.
Qofkastana waxuu xaq u leeyahay inuu helo guri kiradiisu macquul tahay. Xisbiga Vihreä waa kuwo qadariyo xaafadaha kala duwan dhismayaasha kala duwan kuraaxeysigga nawaaxigaas.
Xisbigga Vihreä waxay jecel yihiin in la dhaqaaleeyo dhismooyinkii hore ee taariikhiga casriyeena ku sameeyaan.
3. Degamadu waa inay shacbigeeda sintaa u madax banaando nuuca nolosha
Xisbigga Vihreä cidna looma takooro lab iyo dhedig ahaan ama da’ ahaan . Sinaan ama mid ahaanta bulshadda iney la’haato jaanisyo, xaquuq isku mida xitaa u soo guurayaasha wadanka. Luuqad ahaan dhaqan ahaan lab iyo dhedig iyo qaniisiinta si ay ahaataba inaanan shaqsiyadooda wax loo geysan ama xaquuqdooda.
Xisibigga Vihreä waa mid ogol iskudeegaanka qisdigooda , qadarinayana go’aankooda rag iyo dumarba dumarkana kana dhigo maamulayaal masuul qaada ka hortagista dagaalka dhexmara labada xiriirka ka dhexeeyo loona yarayn lahaa dhibaatooyinka qoysaskana.
Xisbigan waa mid taageera fikrada dadweynaha siiyana jaanisyada kala duwan, sida qaabka deegaanka dadku ineysan wada rabin iney deganaadaan filooyin, xataa hadey qaar rabaan, kuli ineysan wada jecleyn deganaasha magaaladda qaarna ay jecel yihiin iney deganaadaan magaaladda. Magaaladu iney la’haato siyaasad xaga guryaha si ay dadka naafada, hooyooyinka riixanaya gaarigga carruurta iyo dadka da’da ah iney ay ku dhaqdhaaqi karaan dhismahaa gudihiisa iyo wadooyinkaba iyadoo wax celinayana jirin.
Dhamaana qofkasta uu xaq u leeyahay luuqadiisa iyo dhaqankiisa u soo guurayaasha wadankana ay helaan iskuul waxbarashadda luuqada.
Xisbigan wuu taagersan yahay sinaanta, qofna ma aha in kali lagag tago, dhibaatana lagu daayo, kalidu waxay siisaa awood dheeraada xornimada magaalada iyo degenaasha miyaga buuq la’aanta qofka kelida, sidoo kale waxay ku keentaa furitaanka, lakala guuro iyo howlgabnimada .
Sida cadaalada arimo bulshadeedka wanaagsan waxuu keenaa ladnaan. Xisbigana mucaawinadda aasaasiga ee uu soo badhigayo waa mid caadi loogu noolaan karo markii ay kaa istaagto ama kaa dhamaato shaqada aad iminka hayso, ineyna yareyso dadka ku nool ceyrta oo ay waxqabad yar u hindisto. Daqli dheeraada raadiskiisa waxuu madaxbaniini siiyaa degmada . Arimobulshadeedkuna inuu ahaado mid had iyo goor waqti u hayo caawinadda dadka iyo qoysaska.
4. Xisbiga Vihreä waa mid firficooni iyo furnaasho u ah waxwadaqabsigga bulshadda
Ma aha mid xaqdhaqaale sal ku leh siyaasada xisbigan , taasoo ka madaxbaneyneysa qiimeynta, aragtida iyo go’aan gaarista arimaha degmadda. Lama aanan fadhiisan gudi xisbiyo kali ah ama degmooyin ay xisbiyadu gudiyadoodu adag ee mudada badan fadhiya gudiyada degmooyinka jiil ilaa ka jiil. waxaanu anagu doonaynaa inaanu degmooyinkaas shacbigooda helaan waxyaalaha ay u baahanyihiin.
Degmooyinka vihrea waxay caawisaa oo taageeraan iskood u shaqaysayaasha si sinaana cad ah.
Xadadka u yaala degmooyinka waa inaanay adkeyn nolosha dadka. Figrada ay vihrea qabaan waxa haboon in laysku dharo, haddii la badbaadiyo daryeelada jir iyo in nashqada fiican oo deeganka ku haboon oo adag la sameeyo.
Filand waxaa gobolada ka maqan wada shaqanta dumuquraadiga ah, sababtoo maamulka ka sareeya ayaa kala daadsanaanta ugu wacan degmooyinku kuwa ka sareeya wada shaqayntooda ka dhaxaysa ayaa ah mid kala daadsan, taasoo gobolka degmooyinkiisu ay samaysteen heshiisyo ka dhexeeya, kuwasoo ay siyaasiyiintu ka masu’uul yihiin. Xisbiga Vihrea aad buu u taageersanyahay masu’uuliyiin doorashada deegaanka lagu doortay kuwaasoo laga sii doortay guddi goboleed.
degmooyinku waa inay lahadaan shaqo bixiyaal qiimo leh, kuwaa soo qaada masuuliyada shaqaalaha . Waa inay degmooyinkaasi ka tanasulaan ama iska dhaafaan shaqooyinka shaqaaluhu u badanyihiin dumarku sida macalimiinta, caawiyaasha iskuulka iyo kalkaaliyaasha shaqadoodu tooska ahayn, Shaqo bixiyaha erya samarka shaqalihiisa, shaqaala la’aanta soo socota tartankeeda kuma guulaysanayo.
Xisbiga vihrea figradiisu waa in qof kasta, xataa carruurta iyo dhalinyaradaba waa inay arimahooda wax ka qabankaraan ha noqoto degmada ay degenyihiin ama xaafada ay degenyihiin, marka go’aamada la gaadhayo waa in la dhegaystaa figradahooda ururada degaanka, guddida dhalinyarada ama xildhibaanadiida sidoo kale arimaha ilmaha, curyaamiinta iyo ururada dhadka beeshinka. Degmooyinku waa inay mar walba kobciyaan sidii loogala socon lahaa arimaha cusub internedka, waana ina ay shacabku figradahooda ku soo gudbin karaan internedka. Degmooyinku waa ina daryeelaan xidhiidhka is gaadhsiinta deegaanada magaalooyinka ka baxsan ama miyiyada. Degmooyinkuna waa ina kobciyaan helida daryeelka isgaadshiinta ee internedka.
Degmooyinka vihrea dhamaantood waa xubno isku duuban oo isku xuquuqa. Danyartana waa kuwa ka wanaagsan sidii hore, haddii uu dhaqaalahoodu yahay mid hooseeya ama degmadu caawiso, sidaas awgeed sida iskuulada dhamaystirka ah, xanaanooyinka, laybareeriyada, xarumaha caafimaadka waxa dooran karaa daryeelka uu jecelyahay.